Zeorzia-Rosia : Ady anaty Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Novambra 2018 7:26 GMT
Toy ny ankamaroan'ireo fifandirana misy ankehitriny, lasa fiandohanà ady an-tserasera ny fifandonana misy eo amin'i Zeorzia sy Osetia atsimo. Ireto ny fomba fijerin'ireo vehivavy roa bilaogera momba ilay ady izay mirehidrehitra ihany koa ao amin'ny aterineto.
Ao amin'ny bilaoginy (teny rosiana) ao amin'ny LiveJournal, manoratra momba ny fiavian'ny fianakaviany sy ny fandrakofana ataon'ny fahitalavitra rosiana sy tandrefana an'io ady io i basya, izay ny tena anarany dia Ksenia Basilashvili, mpanao gazety aminà onjampeo tsy miankina L'Écho de Moscou (Akon'i Maosko) :
[…] Rehefa mandre resaka momba an'i Tskhinvali aho, dia mihevitra foana ny fiavian'ny fianakaviako, avy any amin'io faritra lavitra io, ahoana no hahafahako miantso azy aminà anarana hafa? Ary alaiko sary ao an-tsaina ny tany doran'ny masoandro, lavash (mofomamy kely) midonaka ao anaty lafaoro, divay mena manaikitra kely naotriky ny fianakaviana ihany…..Ao an-tsaiko ilay raibeko feno fanetrentena nikarakara ny valiziny ary nanainga ho any Maosko, ny fiofanana nataony ary ny fahombiazany, izy izay tonga hatrany amin'ny fitantanana ny Ivontoerana misahana ny Fifandraisandavitra. […]
Mijery ireo fahitalavitra RTR (miaraka amin'ny fampahalalambaovaony Vesti) sy Première chaîne (amin'ny teny rosiàna) ambany fitantanan'ny fanjakàna ao Maosko aho. Faty, olona maratra, mpialokaloka, faharavàna, ankizy maolk'endrika ary ireo antitra any anaty lozoka.
Mijery ireo amin'ny teny anglisy aho, BBC et CNN, :faty, olona maratra, mpialokaloka, faharavàna, ankizy maolk'endrika ary ireo antitra any anaty lozoka
Fahafatesana sy fanaintainana.
Tsy misy maha-samihafa azy ireo sary. Fa fotsiny i Tskhinvali no asehon'ireo fahitalavitra rosiàna, raha i Gori kosa no asehon'ireo fahitalavitra tandrefana, toy ny “fanaovana herisetra ataon'i Zeorzia amin'i Osetia Atsimo” no anehoan'ireo fahitalavitra rosiana ireny fandripahana ireny, fa toy ny “herisetra ataon'i Rosia amin'i Zeorzia” kosa no anehoan'ireo fahitalavitra tandrefana azy. Toy ny hoe naka fitongilanana amin'ity ady idy ireo fahitalavitra ary nahafantatra tsara ny zavatra mitranga. Toy ny hoe fantatr'izy ireo ny fahavalo, ny olondoza. Ho an'ny Rosiàna, i Zoerzia, ary ho an'ny Zorziàna dia i Rosia. Ary tsy lavitra an'izany ny marina.
Tsara kokoa angamba ny manafangaro ny CNN sy Vesti, dia amin'izay ho lasa fahitalavitra fampahalalambaovao goavana, miaraka amin'ny fomba fijerin'ireo ankolafy roa, telo, efatra mifanandrina
Eto aho dia tsy te-hiady hevitra mba hahafantarana izay antony nahatonga ny Rosiàna hizara pasipaoro rosiàna ho an'ireo ao Osetia Atsimo taminà fotoana iray, hoe iza no voalohany nanomboka an'izao rehetra izao, iza no nanome baiko, iza no diso, iza no olona tsara ary iza no olondoza
Ankehitriny, tsy misy dikany intsony izany. Satria mandritra ny nisian'ireo ady politika sy fanapariahana vaovao, tany an-toerana, tao Osetia Atsimo, tao Zeorzia, maty sy mijaly ny olona […]
Ity ny fanehoankevitr'i homo_loquens, iray tamin'ireo amin'ny teny rosiàna tao amin'io lahatsoratra io:
Ksenia, lazao ahy azafady, efa mba nijery CNN sy BBC nandritra ny dimy minitra ve ianao? Tsy hitanao tao amin'ny BBC ve ny antsafa iray nataon'i Sergueï Lavrov, minisitra rosiana misahana ny Raharaha Ivelany ary tao amin'ny CNN ny antsafa iray nataon'i Vitaliï Tchourkine, masoivoho rosiàna ao amin'ny Firenena Mikambana, sy ireo fanadihadiana tsy tapaka alefa mivantana avy any Maosko momba ny toerana raisin'ny praiminisitra Vladimir Poutine sy ny filoha Dmitriï Medvedev tao amin'ireo fantsom-pahitalavitra roa ireo? […] Satria tsy ianao no voalohany amin'ireo olona hitako ho ao tsara sy mamiratra ary manoratra izany, ary manomboka manontany tena sahady aho sao dia manonofy am-pitsanganana, na sao CNN sy BBC hafa no voaraiko ato an-tranoko?
Mponina ao Poti i Samira Kuznetsova fantatra amin'ny solonanarana hoe pepsikolka, izay efa notanisaina teto amin'ny Global Voices ireo lahatsorany sasany (anglisy sy frantsay), dia nanoratra ity lahatsoratra ity tao amin'ny bilaoginy (teny rosiàna), ao amin'ny LiveJournal, momba ny zavatra niainany tety anaty tambajotra sosialy Odnoklassniki.ru (mpiray dabilio tany an-dakilasy) :
Nisy vondrona iray voatokana tao amin'ny Poti izay nahafinaritra, nilamina, naha-te-ho-tia. Nandefa sary betsaka tao izaho sy Tengo, ary ny hafa ihany koa. Nifandray, nifampihanihany, nifampizara fahatsiarovana. Tsy nisy na andro iray aza ka hoe tsy nanoratana zavatra tao.
Ny tanànanay no nampiray anay. Mbola any no mipetraka ny sasany, fa tanànan'ny fahazazany io ho an'ny hafa, toerana nandanian-dry zareo ny taona maro mamy feno fahasambarana tamin'ny fiainany. […].
Fahafinaretako manokana ny nanapika sarina varavarankely iray ery amin'ny rihana faharoan'ilay “tranon'ny jeans “, ao amin'ilay faritra nopetahana anarana hoe Pentagone, trondro ‘saule’ iray eo amoron'ny ony Rioni sy ilay dobo filomanosana tranainy ao anatin'ny tokontanin'ny sekolinay
Faly toy ny ankizy ireo olondehibe.
- Eto, eto aho nitsangantsangana niaraka tamin'ny sipako.
– ary teto handeha hanjono.
– ary eto amin'ity dabilio ity, nilalao lôtô.
– Jereo, ity ny varavarankeliko, nipetraka nanoloana teo ora maro aho, niandry ny reniko mody avy niasa.
– Samira, alaivo sary itsy sy iroa.
– Jereo, ny Tranon'ireo Mpisava Làlana, sy dobo iray lehibe toy ny tamin'ny 20 taona lasa ihany.
Ankehitriny, ady no eto amin'ity fanaovana karajia ity, Rindrin'ny tsy fahaizana mifankahazo, fifanomezana tsiny, fiampiangàna, fifanompàna ary ilaozan'ny olona izy, toy ny mpitsoaponenana. Androany, iray tamin'ireo olona fantatro no nanoratra tamiko hoe nialàny ilay vondrona. Toy ny hoe tsy misy intsony ny fitiavana sy ny fanembonana ny omaly. Androany, lasa tanin'ady.
Ilay ramatoa mpifanolobodirindrina tamiko fahiny mihiakiaka ny hoe lasa mpiray tsikombakomba amin'ny OTAN ny Zeorziàna. Ary dia hàlany noho io antony io izahay
Izy no nampianatra ahy hitendry pianô. […]
Momba io lohahevitra io ihany, jereo koa ireo lahatsoratra [anglisy] ato amin'ny Global Voices.